तौल घटाउनदेखि मधुमेह नियन्त्रण गर्न शाकाहारी खाना, अन्य ६ फाइदा - बडिमालिका खबर
शाकाहारी खाना तौल घटाउन मात्र नभई वैज्ञानिक हिसाबले पनि फाइदाजनक मानिन्छ । विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानमा शाकाहारी खानाले शरीरलाई फाइदा गर्छ ।
हातखुट्टामा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार विधि
के छ उच्च रक्तचाप, अल्जाइमर र पागलपनको सम्बन्ध !
यस्तो छ कालो धतुरोको औषधीय महत्व
शरीरमा आएका मुसाले हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनोस् यी उपाय